Industrial Scale Ultrasonic Kutenderera System Factory - China Industrial Scale Ultrasonic Kutenderera Sisitimu Vagadziri uye Vatengesi
Lab Ultrasonic Midziyo
Chidiki Scale Ultrasonic Kutenderera Sisitimu
5L Kutenderera Sisitimu
10L Kutenderera Sisitimu
20L Kutenderera Sisitimu
Girazi Kutenderera Sisitimu
Stainless Simbi Yekutenderera Sisitimu
Maindasitiri Ultrasonic Midziyo
Industrial Scale Ultrasonic Kutenderera Sisitimu
Kuparadzanisa Kutenderera Sisitimu
Kuenderera Kunotenderera Sisitimu
Stainless Simbi Tangi Kugadziriswa
Pakazara Solution Dhizaini Uye Chigadzirwa Kugadziriswa
Carbon Nanotubes Kupararira
CBD Mafuta Emulsification
Ultrasonic chirimwa pigments pectin yekubvisa muchina
ultrasonic yakakosha CBD mafuta emulsifier
Laboratory Ultrasonic michina ine inezwi bhokisi
Maindasitiri ultrasonic emvura processor
Maindasitiri Kuyerera Ultrasonic Kubvisa Midziyo
ultrasonic graphene akapararira michina
Ultrasonic emulsifying chishandiso che biodiesel kugadzirisa
Ultrasonic mvura yekugadzirisa michina
Lab ultrasonic probe sonicator
20Khz ultrasonic ichiparadzira homoegnizer muchina
Ultrasonic homogenizing inzira yemuchina yekudzikisa zvidiki zvidiki mumvura kuitira kuti zvigoita zvakaenzana zvidiki uye zvakaenzana zvakagoverwa. Kana ma ultrasonic processors achishandiswa se homogenizers, chinangwa ndechekuderedza zvidimbu zvidiki mumvura kuti uvandudze kufanana uye kugadzikana. Izvi zvidimbu (zvinopararira chikamu) zvinogona kunge zviri zvakaomarara kana zvinwiwa. Kuderedzwa kwehuremu hwepakati hwezvimedu kunowedzera huwandu hwezvimwe zvikamu. Izvi zvinotungamira kudzikiswa kwepakati pa ...
20Khz ultrasonic nano zvinhu zvakapararira homogenizer
Ultrasonic chidimbu chakavakirwa pamisimboti yeacoustic cavitation. Kunyudza iyo ultrasonic probe mune herbaceous chirimwa slurry kana mhinduro yakasanganiswa yemidzi midzi, madzinde, mashizha, maruva uye green solvents zvinogona kukonzera yakasimba cavitation uye shear mauto. Paradzai masero emiti uye musunungure zvinhu zviri mavari. JH inopa maindasitiri emagetsi emidziyo yezviyero zvakasiyana uye akasiyana mafomu. Aya anotevera ndiwo ma parameter emidziyo midiki nepakati. Kana iwe uchida sca yakakura ...
Iko kushandiswa kweiyo ultrasonic emvura yekugadzirisa michina inosanganisira kusanganisa, kupararira, kudonha saizi yekucheka, kudzora uye kugadzirisa kwemakemikari. Isu tinopa kune akasiyana maindasitiri zvikamu, senge nano-zvishandiso, pendi & pigments, chikafu & chinwiwa, zvigadzirwa, makemikari uye mafuta.
Ultrasonic sonochemistry chishandiso chemvura kugadzirisa
Ultrasonic sonochemistry ndiko kushandiswa kweiyo ultrasound kumakemikari maitiro uye maitiro. Iyo michina inokonzeresa sonochemical mhedzisiro mune zvinwiwa ndicho chiitiko cheacoustic cavitation. Acoustic cavitation inogona kushandiswa kune akasiyana maficha sekupararira, kuburitsa, emulsification, uye homogenization. Panyaya yekupfuudza, isu tinemidziyo yakasiyana yekusangana nekuburitswa kweakasiyana maratidziro: kubva pa100ml kusvika kumazana ematani emitsara yekugadzira emabhizimusi pabatch. SPECIF ...
Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd.